३५ मिलियनमा कोर्तुवा ६बर्षे सम्झौतामा चेल्सीबाट रियल !! क्रोसियन कोभाबिच रियलबाट लोनमा चेल्सी ! - Experience Best News from Nepal
३५ मिलियनमा कोर्तुवा ६बर्षे सम्झौतामा चेल्सीबाट रियल !! क्रोसियन कोभाबिच रियलबाट लोनमा चेल्सी !
प्रकाशित मिति : बिहिबार, साउन २४, २०७५
लामो चर्चा र रस्साकस्सीपछि इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लब चेल्सी तथा बेल्जियमका गोलकिपर थिवाउट कोर्टुवा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड सरेका छन् । गत वर्षको युरोपियन च्याम्पियन्स लिग विजेता रियलले आफ्ना पहिलो रोजाइका गोलरक्षक केलर नाभासलाई कोर्टुवाद्वारा प्रतिस्थापन गरेको हो ।
२६ वर्षीय कोर्टुवाका लागि रियलले चेल्सीलाई ३५ मिलियन पाउन्ड खर्चंदैछ । रियल र कोर्टुवाबीच आगामी ६ वर्षका लागि पहिलो सम्झौता भएको छ ।
रियलले आज (बिहीबार) कोर्टुवालाई सान्टियागो बेर्नाबेउमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यसको पुष्टि रियलले गरिसकेको छ । रियले सामाजिक सन्जालमा ‘स्वागत कोर्टियस’ लेखेर उनलाई स्वागत गरिसकेको छ ।
यस्तै क्रोसियाका कोभाभिचलाई भने लोनमा चेल्सीमा अनुबन्धित गराईएको छ। उनि यस अघि आफ्नो खेल रियल मद्रिडमा खेली रहेका थिए।
हालसालै सम्पन्न रसिया विश्वकपमा उच्च प्रदर्शन गरेका कोर्टुलाई रियलले त्यसैबेलादेखि ताकेको थियो । कोर्टुवा सन् २०११ मा जेन्कबाट चेल्सीमा अनुबन्ध भएका थिए । पछि उनी लोनमा एथ्लेटिको मड्रिडमा पुगेपछि २०१५ मा पुनः चेल्सी नै अनुबन्ध भएका थिए ।